Michael Owen oo daaha ka rogay saadaashiisa Kulanka Juventus v Chelsea FC | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Michael Owen oo daaha ka rogay saadaashiisa Kulanka Juventus v Chelsea FC
Michael Owen oo daaha ka rogay saadaashiisa Kulanka Juventus v Chelsea FC
Michael Owen ayaa u sheegay Chelsea FC inay ka jawaabto guuldaradii ka soo gaartay Manchester City dhamaadka isbuucaan si ay 1-0 kaga badiyay Juventus Champions League caawa.
Thomas Tuchel ayaa daawaday kooxdiisa oo la kulantay guuldarradii ugu horreysay ee Premier League xilli ciyaareedkan sabtidii markii Manchester City ay 1-0 ku garaacday Stamford Bridge goolkii Gabriel Jesus qeybtii labaad.
Chelsea FC ayaa u muuqatay koox aad looga cabsado isbuucyadii ugu horeeyay ee ololahan laakiin waxaa si aad ah uga awood roonaaday wiilasha Pep Guardiola ee koonfur galbeed London dhamaadkii todobaadka.
Blues ayaa haatan diirada saari doonta sidii ay uga soo kaban lahayd niyad jabkii Sabtidii iyagoo doonaya inay isku dayaan inay qaadaan talaabo kale oo weyn oo ku wajahan wareega bug baxda ee Champions League.
Chelsea FC ayaa difaacatay horyaalka Champions League markii ay 1-0 kaga badisay Zenit Saint-Petersburg horaantii bishaan, weeraryahankii hore ee England Owen ayaa ku taageeraya inay ku guuleystaan kulankan.
Previous articleLuke Shaw oo caawa ka maqan Manchester United kulankeeda Villarreal
Paris (Caasimada Online) – Madaxweynihii ugu horreeyey Iran ee kadib kacaankii Islaamiga ee 1979-ka Abolhassan Banisadr ayaa Sabtida maanta ah ku geeriyooday isbital ku...